စကော့တလန်တွင် လိင်တံမရှိသော အမျိုးသားတစ်ဦး ထောင်ဒဏ်ကျခံရဖွယ်ရာရှိ – Shwe Innlay
[ February 20, 2020 ] PUBG MOBILE က မွနျမာ E-sports ကစားသမားမြားကို နိုငျငံတကာအဆငျ့ ဂိမျးပွိုငျပှဲကွီးသို့ ချေါဆောငျပေးသှားမညျ့ ပွညျတှငျးပွိုငျပှဲတဈခုကငျြးပ	Local
[ February 14, 2020 ] မိမိတို့၏ စိတျအားထကျသနျမှုမြားကို ရှာဖှလေိုသောခရီးသှားမြားအတှကျ Singapore Tourism Board ၏ ယခုနှဈ ခရီးသှားဆှဲဆောငျမှုအစီအစဥျမြားကို Singapore Festival 2020 ဖွငျ့ စတငျခဲ့	News
[ February 14, 2020 ] Samsung ၏ နောကျဆုံးပျေါ တနျဖိုးသငျ့ Galaxy စမတျဖုနျးမြားအား မွနျမာနိုငျငံတှငျ စတငျမိတျဆကျ	Uncategorized
[ February 5, 2020 ] Mytel မှ အပွညျပွညျဆိုငျရာ Data Roaming အတှကျ သုံးသလောကျပေး အစီအစဉျ၏ ကောကျခံမှုစနဈအား ပွောငျးလဲသတျမှတျ	Uncategorized
[ February 5, 2020 ] “အရောငျဆနျးမြားဖွငျ့ HUAWEI nova5T နှငျ့ FreeBuds3ကို မကွာခငျဝယျယူရရှိနိုငျတော့မညျ”	Mobile
HomeHealthစကော့တလန်တွင် လိင်တံမရှိသော အမျိုးသားတစ်ဦး ထောင်ဒဏ်ကျခံရဖွယ်ရာရှိ
စကော့တလန်တွင် လိင်တံမရှိသော အမျိုးသားတစ်ဦး ထောင်ဒဏ်ကျခံရဖွယ်ရာရှိ
A SEX attacker who assaulted two women - despite having no penis - has been placed on the sex offenders register. **No credit line** Carlos Delacruz was inarelationship with both women when he pretended to have sex with them by using an unknown implement instead of his member. Both victims complained of experiencing 'extreme pain' during intercourse with DeLacruz and were forced to stop while both suffered from thrush following the sex sessions. Delacruz, from Banknock, near Falkirk, refused to allow the women to see him naked and always performed in bed with the lights out. Edinburgh Sheriff Court was told both women, who cannot be named due to legal reasons, were left shocked after they subsequently discovered their lover did not haveapenis and had been using an unknown object to enter them. Delacruz, 35, admitted to penetrating both women with an unknown object without their consent when he appeared at the city court yesterday. (TUES) Fiscal depute Kirsten Cockburn told the court Delacruz had been inarelationship with both women at separate times between May 27, 2013 and May 14 last year. Ms Cockburn said: 'The accused was inarelationship with one of the women between May 2013 and January 2016 and they first had sex in May 2013. 'She believed she was being penetrated by his penis. The accused does not haveapenis. 'She knew he was self conscious about his body and always woreat-shirt. '[On one occasion] the accused turned his back [while in bed together] and she heard him witha[condom] wrapper. The accused turned around and inserted his penis into her. 'During intercourse he would hold on to the base of the penis with his hand.' The fiscal added Delacruz and the woman would have sex around onceamonth despite her suffering 'extreme pain' and only being allowed to touch his body 'over his clothing'. 'During their relationship the woman continued to believe he hadapenis', the fiscal added. Ms Cockburn added the woman suffered from thr
စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ အီဒင်ဘာ့ဂ်ျမြို့ တွင် လိင်တံမပါသော အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ချစ်သူမိန်းကလေးများနှင့် လိင်ဆက်ဆံရာတွင် အမျိုးအမည်မသိသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို အသုံးပြုကာ ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းကြောင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံရဖွယ်ရာရှိနေသည်။
အဆိုပါအမျိုးသားနှင့် လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြသည့် မိန်းကလေးများသည် ၎င်းထံတွင် လိင်တံမရှိမှန်းမသိခဲ့ကြဘဲ ဆက်ဆံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
တရားလိုရှေ့ နေ ကာစတန် ကော့ခ်ဘန်းက တရားရုံးတွင် တင်ပြရာ၌ တရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲခံရသူ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ကားလော့စ် ဒီလာခရုဇ်၏ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသွေးထွက်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
(လိင်တံမရှိသော အမျိုးသား ကားလော့စ် ဒီလာခရုဇ်)
ဒီလာခရုဇ်နှင့် လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြသော အမျိုးသမီး ၂ ဦးလုံးသည် အချစ်ဇာတ်လမ်းပြတ်စဲသွားချိန်မှသာ ၎င်းထံတွင် လိင်တံမရှိကြောင်း သိရှိခဲ့ကြသည်ဟု ဆို၏။
(အမှုစစ်ဆေးခဲ့ရာ အီဒင်ဘာ့ခ် တရားရုံး)
အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောကြားရာတွင် ဒီလာခရုဇ်သည် လိင်ဆက်ဆံရာတွင် လိင်တံအရင်းနေရာကို အမြဲကိုင်ထားလေ့ရှိကြောင်း ပြောကြားပြီး အခြားတစ်ဦးကမူ သွေးထွက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။
အမျိုးသမီး ၂ ဦးလုံးသည် ဒီလာခရုဇ်နှင့် ကြိမ်ဖန်များစွာ လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရာတွင် ဒီလာခရုဇ်က ၎င်း၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို အဝတ်အစားမပါဘဲ အမြင်မခံခဲ့သည့်အပြင် လိင်ဆက်ဆံချိန်တွင်လည်း အမြဲမီးပိတ်ပြီးမှ ဆက်ဆံသောကြောင့် လိင်တံမရှိသည်ကို မသိခဲ့ကြချေ။
ဒီလာခရုဇ်ထံတွင် လိင်တံမရှိကြောင်း သိရှိရချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ တိုင်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောကြားရာတွင် ဒီလာခရုဇ်နှင့် ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံချိန်တွင် သွေးများထွက်လာသောကြောင့် ရပ်တန့်ရန် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
၎င်းတို့ ၂ ဦး၏ ၉ လတာ ချစ်ကြိုက်ခဲ့စဉ်ကာလအတွင်း ၁၀ ကြိမ်ခန့် လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးနောက် ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာကြောင့် လမ်းခွဲခဲ့ကြသည်။
လမ်းခွဲပြီး တစ်လခန့်အကြာတွင်မှ ဒီလာခရုဇ်တွင် လိင်တံမရှိကြောင်း သိရှိခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
တရားလိုရှေ့ နေ မစ္စ ကော့ခ်ဘန်းက ပြောကြားရာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်မေးရာ၌ ဒီလာခရုဇ်က တစုံတရာ ထုတ်ဖော်ဝန်ခံခြင်း မရှိသောကြောင့် ဆေးဘက်ဌာနတွင် စစ်ဆေးရာ ၎င်းထံတွင် လိင်တံမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒီလာခရုဇ်တွင် အဘယ်ကြောင့် လိင်တံမရှိသည်ကိုမူ သိရှိရခြင်းမရှိသေးချေ။
၎င်း၏အမှုကို လာမည့်စက်တင်ဘာလတွင် အမိန့်ချရန်စီစဉ်ထားပြီး ထောင်ဒဏ်ကျခံရဖွယ်ရာရှိနေသည်။
အမျိုးသမီးများ ကလေးရယူဖို့ ခက်ခဲစေတဲ့ သတိပြုဖွယ်အကြောင်းအရင်းများ
ကျားအင်္ဂါ ကွေးကော့သော ယောက်ျားများ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်မားကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များတွေ့ရှိ
အင်္ဂလန်တွင် သမီးအရင်းနှင့် ကလေး ၃ ယောက်ရသော အသက် ၈၁ နှစ်အရွယ်ရှိ အဘိုးအို အဖမ်းခံရ
လိင်ဆက်ဆံနေစဉ် နာကျင်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းများ
မိမိတို့၏ စိတျအားထကျသနျမှုမြားကို ရှာဖှလေိုသောခရီးသှားမြားအတှကျ Singapore Tourism Board ၏ ယခုနှဈ ခရီးသှားဆှဲဆောငျမှုအစီအစဥျမြားကို Singapore Festival 2020 ဖွငျ့ စတငျခဲ့
Samsung ၏ နောကျဆုံးပျေါ တနျဖိုးသငျ့ Galaxy စမတျဖုနျးမြားအား မွနျမာနိုငျငံတှငျ စတငျမိတျဆကျ
Mytel မှ အပွညျပွညျဆိုငျရာ Data Roaming အတှကျ သုံးသလောကျပေး အစီအစဉျ၏ ကောကျခံမှုစနဈအား ပွောငျးလဲသတျမှတျ
“အရောငျဆနျးမြားဖွငျ့ HUAWEI nova5T နှငျ့ FreeBuds3ကို မကွာခငျဝယျယူရရှိနိုငျတော့မညျ”